Coach Training(Myanmar Artisan Toolkit) | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Coach Training(Myanmar Artisan Toolkit)
Posted on January 5, 2018 by MYEO in Local, Training //0Comments
Deadline: on going (Limited seats available)
Location: Yangon(Exact location to be confirmed)
Duration: Jan 18-19,22-24
Funding: Self-funded (300 USD per person)
Myanmar Artisan Toolkit isapractical guide to buildingasuccessful craft business and it is calling all teachers, trainers, NGO’s, and organisations working in the craft or livelihood development sector.REGISTRATIONS NOW OPEN……Limited places available to join –5day Coach Training starting JAN 18.
Training will take place in Burmese language with some English components.
Training will take place in Yangon exact location to be confirmed.
လက်မှုလုပ်ငန်း နှင့်ကျေးလက်နေလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများ တွင်လုပ်ကိုင်နေသောသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသော ဆရာ/မ များ၊ သင်တန်းနည်းပြများ တတ်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ယခုပဲစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့လက်မှုပညာရှင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန် ၏ ဆရာဖြစ်သင်တန်းစတင်မှာဖြစ်ပြီး လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
သင်တန်းတွင် မြန်မာ့လက်မှုပညာရှင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန် စာအုပ်မှ လက်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားရေးတစ်ခုတည်ထောင်ရာတွင် လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်သော အကြောင်းအရာများကို အခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတွင် မြန်မာဘာသာနှင့်အဓိကသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့အကြောင်းအရာများတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအနည်းငယ်ပါဝင်ပါမည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း သင်တန်းပို့ချမှာဖြစ်ပြီး နေရာအတိအကျကို အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လကျမှုလုပျငနျး နှငျ့ကြေးလကျနလေူမှုဘဝဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအနျဂြီအို အဖှဲ့အစညျးမြား တှငျလုပျကိုငျနသေောသူမြား၊ စိတျဝငျစားသော ဆရာ/မ မြား၊ သငျတနျးနညျးပွမြား တတျရောကျရနျဖိတျချေါပါတယျ။ ယခုပဲစာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါပွီ။ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ မွနျမာ့လကျမှုပညာရှငျစီးပှားရေးလမျးညှနျ ၏ ဆရာဖွဈသငျတနျးစတငျမှာဖွဈပွီး လူဦးရအေကနျ့အသတျရှိပါတယျ။
သငျတနျးတှငျ မွနျမာ့လကျမှုပညာရှငျစီးပှားရေးလမျးညှနျ စာအုပျမှ လကျမှုလုပျငနျး စီးပှားရေးတဈခုတညျထောငျရာတှငျ လကျတှအေ့သုံးပွုနိုငျသော အကွောငျးအရာမြားကို အခွခေံမှာဖွဈပါတယျ။
သငျတနျးတှငျ မွနျမာဘာသာနှငျ့အဓိကသငျကွားပို့ခမြှာဖွဈပွီး တဈခြို့အကွောငျးအရာမြားတှငျ အင်ျဂလိပျဘာသာအနညျးငယျပါဝငျပါမညျ။
ရနျကုနျမွို့တှငျး သငျတနျးပို့ခမြှာဖွဈပွီး နရောအတိအကကြို အသိပေးအကွောငျးကွားသှားမညျဖွဈပါသညျ။
Registration Link: Coach Training(MAT)
For more Information: https://www.facebook.com/Myanmarartisantoolkit/